Somaliland: Siyaasiyiin iyo Madaxdhaqameedyo cambaareeyey Xukunka lagu riday Masuuliyiinta WADDANI - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Siyaasiyiin iyo Madaxdhaqameedyo cambaareeyey Xukunka lagu riday Masuuliyiinta WADDANI
Cuqaal, waxgarad iyo Siyaasiyiin ka soo jeeda Beesha Xoghayaha Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Xisbiga Waddani, ayaa si kulul u cambaareeyey xukunka ay shalay Maxkamadda Gobolka Maroodi-jeex ku riday labada masuul ee Xisbigaasi, gaar ahaan Xukunka Xadhiga ah ee ay Maxkamaddu ku xukuntay Xoghaye Yoonis Axmed Yoonis.
Shir-jaraa’id oo ay ku qabteen Magaalada Hargeysa, ayaa waxay cuqaasha iyo waxgaradka Beesha Toljecle ku sheegeen in xukunka lagu riday Siyaasigaas uu yahay mid Cadaalad darro oo aan la aqbali karin.
Waxa ay intaas ku dareen in xoriyadooda si dhakhso ah loogu soo celiyo labada masuul ee sharci-darada ku xidhan bisha iyo dheeraadka.
Ugu horayn waxa Shirka jaraa’id ka hadlay Yacquub Cabdilaahi oo kamida masuuliyiinta Xisbiga WADDANI, kaasoo sheegay in cadaaladii Somaliland god-madow ku dhacday, isla markaana ay meesha ka baxday, waxaanu ugu baaqay xukuumadda inay faro-gelinta siyaasaddeed ka dayso Hay’addaha Garsoorka.
Waxa kale oo isna shirkaas ka hadlay Mowliid Axmed Xasan oo kamida madaxdhaqameedka Beesha, kaasoo sheegay in xukuumadda Kulmiye sii dhacayso, kaddibna ay ku gal-galanayso cabudhinta Bulshada. “maanta dalku wuxuu marayaa xaalad adag. Waxaynu ognahay xukuumad kastaa markay sii dhacayso waa caaddadeed inay dadka cabudhiso oo ay xisbiyada mucaaridka cadaadis iyo xadhig kula kacdo.”
Waxa uu intaas ku daray “ haddii aanu nahay Beesha uu ka soo jeedo Yoonis Axmed Yoonis ee Toljecle, waxaanu maraynaa oo hiil iyo hooba la garab taaganahay xisbiga WADDANI, sidaas ayaanu ku tashanay” ayuu yidhi Mowliid.
Caaqil Maxamed Cali Shafeec iyo Oday Maxamuud Yuusuf Aadan oo iyaguna halkaa ka hadlay ayaa iyaguna xukun cadaalada ka fog ku tilmaamay xukunka Xoghayaha Dhalinyarada iyo Ciyaaraha ee Xisbiga WADDANI lagu riday, waxaanay Dawladda ka dalbadeen in xoriyadooda loo soo celiyo labada siyaasi.
Oday Axmed Yoonis oo isaguna Shirka jaraa’id ka hadlay, ayaa sheegay in cadaalad-darada iyo qabyaaladdu kamid yihiin dhibaatooyinka aafeeyey dalka ee uu xisbiga Kulmiye horseeday. “Aniga labada Inan ee xidhan waa isugu kay mid, in midna xadhig lagu xukumo, midna la sii daayo, waxaan u aragnaa arrin cadaalada ka fog ee waa in labada Inanba la sii daayo.” Ayuu yidhi.
Axmed Yoonis, ayaa sidoo kale sheegay “anigu waddanka saddex arrimood ayaan uga tegayaa. Cadaalad-darro, Qabyaalad iyo Sicir-barar”ayuu raaciyey.
Chief Caaqil Maxamed Sheikh oo gabagabadii shirkaa Jaraa’id ka hadlay, ayaa Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo ku dhaleeceeyey cago-juglayn iyo xadhi sharciga ka baxsan oo sida uu sheegay ay kula kacday Siyaasiyiinta Xisbiga WADDANI ka xidhan, isagoo sidoo kale si kulul u duray xukunka Maxkamaddu shalay ku riday labada Masuul Yoonis Axmed Yoonis iyo Maxamed Sidiiq Dhame.
Caaqilka ayaa sheegay in xukunkaa cadaalad-darada ahi mid lamidi maalin walba ku dhaco Dad aan waxba galabsan oo cid ka war haysa iyo dad u hadla toona lahayn, taasina ay sawir ka bixinayso hogaaminta iyo Siyaasada Xisbiga talada haya ee Kulmiye.
Ugu dambeyn Cuqaasha, waxgaradka iyo siyaasiyiintani waxay Hay’addaha Garsoorka ugu baaqeen in sida ugu dhakhasaha badan looga noqdo xukunka siyaasadaysan ee lagu riday Yoonis Axmed Yoonis, iyagoo dhanka kalena Xukuumadda u soo jeediyey inay fara-gelinta siyaasaddeed ka dayso garsoorka.
Maxkamadda Gobolka Hargeysa, ayaa shalay xadhig hal sanno ah ku xukuntay Xoghayaha Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Xisbiga WADDANI Yoonis Axmed Yoonsi, halka ay sii deyn ku xukuntay Guddoomiyihii Garabka dhalinyarada ee Xisbigaas Maxamed Sidiiq Dhame, xukunkaasoo ay Xeer-ilaalinta Guud Rafcaan deg deg ah ka qaadatay.
Somaliland: Prof Axmed Ismaaciil Samatar Oo Ka Digay Ciida Dahabiga Ah Somaliland Ee Dalka Jabuuti Looga Daad Gureeyo Lawyo Cado “Meeday Madaxdii Somaliland, Waxaad Mooddaa In Dalka Dagaal Lagula Jiro”..Axmed Samatar
Somaliland: Magacyada Guddiyo Cusub Oo Uu Axmed Muumin Seed Xalay Magacaabay Iyo Shaqada Ay Qaban
Maraykanka oo doonaya inay Bashar Assad wadahadal ku cadaadiyaan